ny tombony sy ny fandroahana ny gorodona volotsangana mavesatra
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina dia mihamaro hatrany ny gorodona hita eo amin'ny fiainantsika. Raha ampitahaina amin'ny gorodona hazo nentim-paharazana dia manana tombony maro ny gorodona volotsangana mavesatra. Izy io dia endrika nohavaozina amin'ny gorodona volotsangana nentim-paharazana. Ny faharetany, ny tanjany ary ny hamafiny dia nihatsara. Amin'ny maha maitso vaovao ...